December 9, 2016 – ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်
ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့်စီးပွားရေး၊စည်ပင်သာယာ ရေးနင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးရာကော်မတီ(၂)ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့
Posted on December 9, 2016 (March 12, 2020) by bgoper
(၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့ ၊ နံနက် (၁၀းဝဝ)နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသ ကြီးရေးရာစည်းဝေးခန်းမ၌ ဥပဒေပြုရေးကော်မတီနှင့်စီးပွားရေး၊စည်ပင်သာယာ ရေးနင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးရာကော်မတီ(၂)ရပ်တို့၏ ပူးပေါင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတွင် စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေကြမ်းရေးဆွဲရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေးကြသည်။ […]
သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ရွာကြီးကုန်းရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းသို့ ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မှ ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်များ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့
Posted on December 9, 2016 by bgoper
(၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ရွာကြီးကုန်းရပ်ကွက်ရှိ အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရင်မှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးထံသို့ ဗလာစာအုပ်ဒါဇင်(၅၀)နှင့် ဘောပင်(၃၀၀)ချောင်းတို့အား ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီး အခမ်းအနားတွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမှ ဆရာ/ဆရာမများသည် ကျောင်းသူ/ကျောငး်သားများအား ပညာသင်ကြားပေးရာတွင် ကရုဏာထားပြီး မိဘသဖွယ်သဘောထားကာ ပညာသင်ကြားပေးရန်နှင့်ထူးချွန်ထက်မြက်သော ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါရန်မှာကြားခဲ့ပြီး ဆရာ/ဆရာမများ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်များအား ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ […]
သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ ခရိုင်/ မြို ့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပဲခူးတိုုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တက်ရောက်ခဲ့
(၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ ခရိုင်/ မြို ့နယ်တရားရုံး အဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်း၊ ပဲခူးတိုုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်ရင်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးမောင်မောင်ရွှေ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချ ုပ် ဦးအုန်းမြင့်၊ ပဲခူးတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ခရိုင်/ မြို ့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူ းများနှင့် တရားရေးဝန်ထမ်းများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး အဆောက်အဦဖွင့်ပွဲ အထိမ်းအမှတ်အလံပေးအပ်ကာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာသူများမှ တရားရုံးအဆောက်အဦသစ်အား လှည့်လည်ကြည့်ရှု့ခဲ့ပါသည််။ […]
ကျောက်​ကြီးမြို့နယ်​များရှိ မသန်​စွမ်​းသူများအား အား​ပေးကူညီ​တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်​​ရောက်​ခဲ့
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တိုင်းရင်းသားလူမျို းများအရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဦး (ခ) ဦးတင်ဆန်းဦးသည် (၉. ၁၂. ၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ အောက်မေ့ဖွယ်ခန်းမ၌KDNနှင့်The Johonniterအဖွဲ့တို့၏ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် (၃. ၁၂. ၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းနေ့အထိမ်းမှတ်အဖြစ် ရွှေကျင်မြို့နယ်နှင့် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်များရှိ မသန်စွမ်းသူများအား အားပေးကူညီတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ […]
ချောင်းမငယ်သစ်တောကြိုးဝိုငး်အတွင်း ကောင်းမြန်မာအောင်ကုမ္ပဏီနှင့်ဒေသခံပြည်သူများအကြား အငြင်းပွားနေမှုအပေါ် လေ့လာစိစစ်ခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့
(၉-၁၂-၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်းသည် ထန်းတပင်မြို့နယ် သိမ်းဆည်းခံလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ထန်းတပင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ချောင်းမငယ်သစ်တောကြိုးဝိုငး်အတွင်း ကောင်းမြန်မာအောင်ကုမ္ပဏီနှင့်ဒေသခံပြည်သူများအကြား အငြင်းပွားနေမှုအပေါ် လေ့လာစိစစ်ခဲ့ပြီး ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုခဲ့ပါသည်။ […]